Amantombazana afana nawe ngeMaroon 5 (equka uCardi B) - Izinto Zobugcisa
'Amantombazana anjengawe' yingoma yothando apho u-Adam Levine abonisa uxabiso ngentombazana yakhe emva kokoyisa ixesha elinzima kubudlelwane babo.
Isizathu sokuba amantombazana afana nawe abaleke ujikeleze kunye nabafana njengam
'Yide ilanga litshone xa ndiza
Ndifuna intombazana enjengawe, ewe ewe
Amantombazana afana nawe ayakuthanda ukuzonwabisa, kwaye ewe, nam
UAdam Levine uyavuma ukuba yena kunye nentombazana yakhe bayadingana ebomini babo.
IMaroon 5 yaqala 'Amantombazana Anjengawe' ngoMeyi 30, 2018 ngexesha labo IPilisi ebomvu kwiBlues Tour gig eTacoma, eWashington.
Ekuqaleni ingoma yesithoba kwi-albhamu yesithandathu ye-Maroon 5, Iipilisi ezibomvu zePilisi , I-remix equkethe umrepha waseMelika uCardi B, wakhululwa njengoyedwa ngoMeyi 30, 2018. Inguqulelo ehlaziyiweyo ishiya amazwi okuqala kunye nemveliso ihambile phambi kokuba uCardi B atyibilike kwindinyana yakhe kwisiqingatha sokugqibela sengoma.
IMaroon 5 inembali yokusebenzisana nabaxhasi. I-hook-ups ezidlulileyo zibandakanya ezinoWiz Khalifa ('Payphone'), uKendrick Lamar ('Musa Ukufuna Ukwazi') kunye ne-A $ AP Rocky ('Whisky').
Ividiyo yomculo yathathwa ngumlawuli bhanyabhanya waseMelika uDavid Dobkin, oqala ukubandakanya iifilimu IiKnights zaseShanghai , I-Crashers yomtshato , kunye UMgwebi . Ngaphambili wayesebenza neMaroon 5 kwimbonakalo yabo 'yeSwekile' kwaye 'Ungafuni Ukwazi.'
Ikliphu iqala ngoAdam Levine edlala ingoma embindini wegumbi, ngaphambi kokuba ikhamera ijonge ukuveza imvumi uCamila Cabello edanisa emva kwakhe. Ulandelwa ngokulandelelana kwabasetyhini abahambahambayo kunye nokuvumelanisa imilomo ngeenxa zonke kuye, kuquka uCardi B. Abafazi ngokulandelelana kwabo nguFebeebe Robinson, u-Aly Raisman, uSara Silverman, uGal Gadot, uLilly Singh, u-Amani Al-Khatahtbeh, Trace Lysette, UTiffany Haddish, Angy Rivera, Franchesca Ramsey, Millie Bobby Brown, Ellen DeGeneres, Jennifer Lopez, Chloe Kim, Alex Morgan, Mary J. Blige, Beanie Feldstein, Jackie Fielder, Danica Patrick, Ilhan Omar, Elizabeth Banks, Ashley Graham, no Rita Ora.
Ekupheleni sibona umfazi ka-Adam Levine uBehati Prinsloo, ophethe umntwana oyintombazana, uDusty Rose.
Kuthathe phantse iinyanga ezintlanu ukwenza le vidiyo. U-Ellen DeGeneres wayengowokuqala abacela ukuba avele, kwaye ngokuka Dobkin baqhubeka nokwandisa ishedyuli ukuze abantu abaninzi babekhona. Uxelele Ukuzonwabisa ngeveki :
Emva koEllen, sabhalela iileta zethu kuye ngamnye wabo bantu basetyhini, kwaye saliphatha kakuhle eli qela. Olu luluhlu lwabantu esiphefumlelwe ngabo, abathi ewe kwaye ngokwenene bakwazi ukwenza oko. Ndisebenzise igama elithi 'curated' ngengqondo yokuba noluhlu lwabantu kwaye babekhona kwaye bafuna ukumela iintlanga ezininzi ezahlukeneyo kunye neenkolo kunye nemvelaphi kunye nolwazelelo. UAdam… wabhala iileta. Abanye abantu wayebafowunela. Ndiyazi ukuba ubize uTiffany Haddish ngqo. '
UDobkin wongeze ukuba abanye babafazi beza bengakhange balunge kumaqela abo, kubandakanya noCardi B. 'UCardi wabhabha wayidubula le vidiyo kungekho mntu uvumayo, utshilo. 'Wayemangalisa.'
UDobkin uvumile ukuba bekukho umdlali weqonga omnye owaziwayo ebengenakukwazi ukuhla eze kwi-cameo. 'Into endizisolayo ngayo yayinguHelen Mirren,' watsho, 'wayezakuba kuyo, kwaye asinakukwazi ukwenza ishedyuli.'
UAdam Levine uxelele Ezizimeleyo ukuba ubeke umsebenzi omninzi ekwenzeni le vidiyo yengoma kunye noDavid Dobkin kunokuba intle kakhulu kunenye abayenzileyo. Ukhumbule: 'Sihleli kwaye simamele ingoma, njengamaxesha ali-150 kwaye sazama ukuqonda ukuba yenzelwe ntoni- indlela yokuphucula intsingiselo yengoma. Kungenxa yokuba 'Amantombazana Anjengawe' yile ngoma emnandi, elula, kodwa xa usongeza ividiyo iyinika elinye inqanaba.
'Umhlaba unzima ngoku, kwaye kuninzi okuqhubekayo, ke ndiyayithanda inyani yokuba ingoma kunye nevidiyo zilula kancinci, uqhubeke uLevine. Ndikhulile, ndingene kwizinto ezininzi, ndenze yonke into engalunganga, kodwa eyona njongo iphambili kule vidiyo inceda abantu ukuba baqonde ukuba kufuneka sibambane. Ngokuqinisekileyo abantu bayazenza iimpazamo, akukho mntu kule planethi ongakhange ayenze loo nto, kodwa ukuba asixhasi, asiyonto. '
UAdam Levine wabhala le ngoma kunye noStarrah noJason Evigan. Kwesi sithathu sinye sabhala iMaroon 5's 'What Do Lovers Do'; isiginci uJames Valentine uthathela ingqalelo 'Amantombazana afana nawe' njengokuqhubeka ngendlela efanayo.
'Kum ilungile ngqo phambili, ingoma yengoma yeklasikhi kunye nenye ngokwenene, inyani yeendlebe i-chorus,' uxelele. Irediyo yeABC .
Ingoma yayinguMaroon yesihlanu yesine eshushu eyi-100 # 1 elandelayo 'Iyandimangalisa,' Ihamba okwejagger 'kwaye' Ngobunye ubusuku. '
Kwakuyi-Cardi B yesithathu eshushu eshushu yeetshathi emva 'kweBodak Yellow' kwaye 'Ndiyayithanda.'
Ukunyuka kwengoma ukuya kwingqungquthela kwitshathi yomhla kaSeptemba 29, 2018 iphele irekhodi elinamaviki angama-34 ngaphandle kweengoma zerap (ikakhulu uDrake) kwi # 1 kwiBillboard Hot 100. Imvumi yangaphambili yomculo ukufikelela kule ngqungquthela ibuyile NgoJanuwari 2018, xa iCamila Cabello's 'Havana' yayikwindawo ephezulu.
'Amantombazana afana nawe' aqhankqalaza uluhlu lukaVevo lweevidiyo zomculo ezibukelwa kakhulu kwihlabathi liphela ngo-2018. Ikliphu yayinombono opheleleyo wezigidi ezili-1.3 eqongeni eqongeni ukuya kuNovemba 30, 2018.
IMaroon 5 ikwangoyena mculi ujongwe kakhulu kwihlabathi liphela kwi-2018 ene-1.6 yezigidigidi zokujonga kwihlabathi liphela kwinkonzo yokubamba ividiyo.
IMaroon 5 idlale le ngexesha lokudlala kwabo kumdlalo weqonga we-2019 Super Bowl, apho badityaniswa khona yingoma yekwayala yevangeli kunye negubu.
Uncedwa yiMaroon 5's Super Bowl LIII show halftime show, 'Amantombazana Anjengawe' abophe irekhodi lokuphila ixesha elide kwiBillboard Hot 100 yomhla kaFebruwari 16, 2019. Ingoma ebibanjelwe # 10 kudweliso lweveki emva komsitho, ingena iveki yama-33 kwiveki phezulu 10. Oku kuhambelane nerekhodi likaEd Sheeran ' Imilo yakho Olona luhlu lude lude luqhutywa kwitshathi yeminyaka engama-60. I-Post Malone kunye ne-Swae Lee 'kajongilanga' kamva zadibanisa ezinye iingoma ezimbini xa ichithe iveki yayo yama-33 kwi-10 ephezulu kwitshathi yomhla kaSeptemba 21, 2019.
Ingoma yaqhekeza irekhodi lelona xesha lide libalekayo kwitshathi yeBillboard yaBadala yaMadala xa yayigweba ngeveki yayo yama-29 ngomhla we-6 kuJulayi 2019, befumana uDobie Grey kunye noMalume Kracker 'weDrift Away,' ochithe iiveki ezingama-28 phezulu kuluhlu ngo-2003. Kwaye ngo-2004. Ekugqibeleni yahluthwa itrone nguLauren Daigle's 'Utsho' emva kokuchitha iiveki ezingama-33 kwindawo ephezulu.
Uhlobo lwakudala amanqaku kwisiqendu sokuvula kuthotho lomdlalo weqonga kumabonakude weNetflix IBridgerton . Idlala ngexesha lomboniso apho intombi endala yaseBridgerton, uDaphne, kunye namanye amanenekazi adibana nabo.
andinakuma ngokubhabha andisosidenge eso
ke uthi lusuku lwakho lokuzalwa
Umphefumlo wokhuthaza inombolo 9
ndivela kumhlaba ongezantsi
andifuni ukuthandana nawe